XAQIIQOOYINKA DHABTA AH EE MEDVEDKA: KHATARTA DADKA? - BEER CAGAARAN
Medvedka waa mid ka mid ah cayayaanka caadiga ah ee beeraha iyo beeraha khudradda.
Waxa kale oo loo yaqaanaa sare, capustanus iyo qallayl. Guryaha khudradda cagaaran, geedo badan oo hodan ku ah humus, lagu koriyo, agagaaraha biyaha iyo beeraha dalagga. Badiyaa waxay keenaan nolol habeenkii, mararka qaarkood waxay u soo baxaan dusha sare inta lagu jiro maalintii.
Medvedka waxaa lagu ogaan karaa xajmigeeda weyn (3-8 cm), jirka oo ka mid ah midabka huruudka ah-cagaaran leh calaamadaha dahabka ama bunni. Duufaantu waa saytuun iyo jaale, baalasha maqaarku waa kuwo gaaban oo hufan.leh xididooyin badan.
Marka baalasha la duubo, xididdadu waxay ku badan yihiin dibiga. Kaliya lix lugood, labada lugood ee ugu horreeya kuwaas oo ah lugo gaaban oo xoog leh leh, oo loogu talagalay in la qodo. Dhanka kale, caleemaha waxay u egyihiin iskudub dhexda u dhexeeya kansarka iyo macdanta.
Jidhka dharka waa mid xoogan, haddii aad gacanta ku qabsato, waxay isla markiiba bilaabi doontaa inay isku baddasho, isku dayayso inay nafteeda xor u noqoto.
Waa maxay halis?
Jilicsan ama ma aha?
Maya, inkasta oo ay muuqato cabsi weyn, cayayaanka ma aha sun ah.
Miyuu khatar u yahay qofka?
Khatarta kaliya ee curyaanka waa cunnida iyo qaab nololeedka.
Waxay ku nooshahay dhulka hoostiisa, jabiso marinnada iyo dhirta geedka dhirta ee dhirta, iyada oo burburiya geedo, cunidda inta badan dalagga. Cuntadeeda waxaa ka mid ah digriiga iyo xididdada.iyo sidoo kale cawska dhirta beerta. Gaar ahaan jecel yahay kaabajka iyo basasha.
Habka nolosha, caleemaha iyo caleemaha maskaxda waxyeello, yaanyada, dabacasaha, xididada, eggplants, qajaarka, nalalka ubaxa, xididdada geedka iyo ku xoortay geedaha. Sidoo kale Medvedka waxay cunaan gooryaanka iyo cayayaanka halista ah, sida geedka lowska.
Miyuu qaniinaa ama ma aha?
Medvedka waa gabi ahaanba mid amaan ah, oo kaliya ma qummanaan karo qof, sidaas darteed ma heli doontid sawir qaniinyo ah. Ugu badnaantii qof weyni wuxuu sameyn karaa inuu lugeeyo lugaha hore ee farta. Suxuufku wuxuu noqon karaa xanuun, laakiin sida "qaniinyo" ma keeni doonto waxyeelo.
Caanaha ugu weyn
Ma jiro rikoor rasmi ah oo ku saabsan baaxadda tijaabada ugu weyn. Beerta ayaa sheegaya inay arkeen dhar gaaban 12 ama 15 sentimitir dheer. Tani waxay suurtogal u tahay xaaladaha nololeed ee wanaagsan iyo quudinta joogtada ah ee dareenka.
Miyuu duuli karaa?
Inkasta oo hab nololeedka dhulka hoostiisa, ciyaalka ayaa dabaasha oo u duuli kara.
Diyaarinta dusha sare habeenkii, cayayaanka ayaa u duulaya masaafo dheersi aad u hesho meelo quudin oo cusub.
Haddaba sidee buu u heesayaa? Habeenkii, laga bilaabo burrowskooda, Medvedka waxay sameeyaan xeelado xoog leh iyo dhawaaqyo qulqulaya, maqnaashaha qaylada boodhka jilicsan ama qabriga. Cayayaanka waxay isticmaashaa heesaheeda si ay ula xiriiraan dadka isku dhejiyaiyada oo la baddalayo tifaftirka iyo dabeecada hadalka. Inta badan tani waa xilli mates. Waxay u adeegsameysaa buunshaha baalasheeda baalasheeda.
Maxaa aan jeclayn?
Isku day inaad keento daawada Medvedok, bannaanka ayaa jeexaya marinnada dhulka hoostiisa oo ku rid sunta sunta ama dharka dhaqada. Si la mid ah, waxaa suurtogal ah in laga cabsiiyo Medvedok irbad irbadda irbad ku wareegsan beerta.
Sidoo kale macnaheedu waa ka soo horjeeda medvedki adeegsiga baakad laga bilaabo galley la kariyey, shaciir ama sarreen, ku dar saliida gabbaldayaha yar iyo xittaa cayayaanka.
Samaynta god qallalan: dayrta, digada waxaa lagu shubay god oo leh qoto dheer oo ah 60-80 cm, iyo xilliga qaboobaha waa la tuuraa oo cayayaanka la helay ayaa la burburiyey.
Haddii aad rabto inaad ilaaliso dhirta beerta naftooda, googooyo yar yar oo ah dhar dabiiciga ah 20 by 10 cm, qoyan biyaha iyo xir oo saldhigga afkoda ka hor iyaga beeray dhulka.
Urka digaaggu sidoo kale aad buu u xun yahay daawada Medvedas. Si arrintan loo sameeyo, samee faleebo biyood oo leh dhoobo iyo marmar biyo biyo ah.
Waxaad ku beeran kartaa meelaha jadeecada ah siderata, inkastoo inta kale ee dalagga ah laga yaabo inaysan joogin.
Meel kasta oo dhowr mitir ah, gali gudaha caleemaha cagaaran ee aler, oo ha ilaawin inaad beddesho iyaga waqti ka waqti si kuwa cusub.
Maxaa ka baqaya?
Si loo ilaaliyo beerta laga bilaabo duullaankii gawaarida, waxaa lagama maarmaan ah in si joogta ah loo beero ciidda oo u burburiyo marka buulooga la helo.
Haddii ka hor beerashada dhirta beerta, dhoobo oo toon ah oo toonta, walwalka caleemaha ama sheybaarka, oo ku rusheey dhulka oo leh ukunta la jajabiyey iyo lakabka kale ee carrada, ka dibna waxay u badan tahay inay cabsiiso cabsida.
Waa suurtogal in la beero inta u dhaxaysa safafka ubaxa ee marigolds ama chrysanthemums, taas oo sidoo kale ma oggolaan doonto medvedas si ay u degaan goobta.
Laga bilaabo dhamaadka May ilaa Juun inta u dhaxaysa safarka, waxaa lagula talinayaa in la dabciyo dimuqraadiyada 10-15 cm si loo hubiyo in ay si dhab ah u burburiyaan ukunta dareenka.
Xannaanooyinka waa la ilaalin karaaiyada oo qodaya agagaarkiisa qashinka iyo buuxinta ciidda lagu qooyay gawaarida.
Sida cayayaanka ugu badan ee soo jiidata iftiinka, waxay si sahlan u soo jiidanayaan foosto habeenkii. Haddii aad rakibid foosto u dhow derbiga, oo waxaad ku dhejineysaa hoos u dhigis gaasta iyo biyaha hoose, digaagga ayaa u duuli doona iftiinka waxayna u dhintaan dareeraha, oo halkaa ku dhinta.
Kiimikooyinka waxaad isticmaali kartaa daawooyinka gaarka ah sida "Fenoxin plus", xalalka "Karbofos", "Bankol", "Thunder", "Teddy Bear", "Medvetoks", "Rubit" iyo kuwo kale.
Dabiici (dabiici ah)
Medvedki waa raaxo jecel ee jiirarka, daboolka, qorraxda, iyo shimbiraha qaar (xajmiga, xayawaanka, starlings, herons, iyo kuwa kale). Thanks to iyaga, ugu badnaan ee Medvedka cuni karo beerta waa in ka badan 10% ee goosashada wadarta.
Mashannada yaryar ma cunaan?
Haa, dhirta malabka, sida cayayaanka kale, ayaa lagu daraa liiska cuntada saxarada.
Sida ay u soo baxday, xarku ma aha sun, laakiin, si kastaba ha ahaatee, keeno waxyaabo badan oo waxyeello u ah inuu bannaanka iyo dalagyada. Waxay ku xiran tahay xididada waxayna cuntaa digirta iyo miraha kale ee khudradda, iyaga oo goglanaya jeexyo xoog leh. Laguma wareegi karo cayayaanka kale ee muuqaalka ama codadka ay sameeyaan.
Waxaa jira habab badan oo casri ah oo casri ah ee burburintooda. Marka lagu daro "bani-aadmiga", marka dabiiciga ah ayaa ciyaalku si fudud u cabsigelin karaa. Beeraleydu waxay dooran karaan qaab kasta oo wax looga qabanayo cayayaanka, kuwaas oo u muuqda iyaga inay yihiin kuwa ugu haboon iyo waxtar leh.